Muuqaalka ubaxa | February 2020
Ugu Weyn Ee Muuqaalka ubaxa
Goobo iyo muuqaal ubax ah
Si loo siiyo asal ah ubaxyada, mararka qaarkood warshad leh caleemo waaweyn oo leh midabyo kala duwan iyo midabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa - tani waa geyrea, taas, taas awgeed, waxay heshay qayb ballaadhan oo naqshad dhuleed. Warshadu waxay nagu timid naga timid Waqooyiga Ameerika, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan dadaalada beeraleyda, waxay heleen midab khafiif ah oo wanaagsan iyo degenaansho lagu guuleysto ee ubaxeena.
Mid ka mid ah dhirta oo qurxin kara sariirta ubaxa waa helikrope. Soo jiidashada waxay ku jirtaa iftiin, ubax aan cidhiidhi lahayn oo leh fayradda vanilla. Muuqaalka khaaska ah ee helitaanka raasumaalka waa awoodda loo leexdo madaxyada ubaxa ka dambeeya dhaqdhaqaaqa qorraxda. Sidaa awgeed magaca geedka, oo ku jirta Giriigga macnahiisu waa "soo celinta qoraxda."
Tilmaamyada beerista ee miisaanka qulqulka: beeritaanka iyo daryeelka ee berrinka bannaan
Dadka aan jeclaan lahayn chamomile, way adag tahay in la helo. Cuntadan cute ah waxaa loo tixgeliyaa calaamad jacayl. Gabdhuhu waxay si gaar ah u raacsan yihiin tan: mid kasta oo ka mid ah ugu yaraan hal jeer ayuu ciyaaray ciyaarta "jacayl-nacayb", jeexan by petal. Haddii aad rabto inaad ku koro mucjiso this beerta ubaxa, bilowga waxay noqon doontaa mid waxtar leh si aad u ogaato in chamomile beerta waxaa dhab ahaan loo yaqaan xannaano, ka dibna waxaan ka hadli doonaa beeritaanka iyo daryeelka oo ku saabsan dhulka u furan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Muuqaalka ubaxa 2020